Iingcebiso ezivela kwi-Semalt On Indlela yokukhusela i-Trojan Malware kwiGadget yakho
Ukuba ikhomputha elawulwa yiintsholongwane ezinobungozi ingaba nzima. ITrojan isifo esinjengegciwane eliya kwikhompyutheni yakho. Emva kokulawula ikhompyutha yakho, iTrojan isebenza ukuqokelela ulwazi oluxabisekileyo olugcinwe kwiinkqubo zakho zokhuseleko. Ininzi, le ntsholongwane ingena kwikhompyutheni xa umsebenzisi wokugqibela unqakraza ama-pop-ups kunye ne-email spams. Intsholongwane yeTrojan ingabelana ngolwazi oluninzi olukhuselekileyo njengeeblogs kunye neenkcukacha zebhanki kubaxhasi emva kokulawula iPC yakho - corkcicle air.
Le ntsholongwane ibuye ibuye iqondise abasebenzisi bokugqibela kumaphepha athile ngokuzibeka ngokwaso njenge-browser. Ikhompuyutheni esuleleke kwi-virus yeTrojan isoloko iguqulelwa njengonophelo U-Ivan Konovalov, uMphathi weNtengo kaMthengi we-10 (Semalt , uxela amacebiso kunye neengcebiso ezingasetyenziselwa ukususa le nkqubo kwikhompyutha yakho.
Iintsingiselo malunga nendlela yokususa iTrojan enobungozi obubi
Ukufumana i-antivirus evela kwinkampani eneenkcukacha eziphezulu kukuhlala kukukhuselekile. I-anti-malware inceda ukukhusela iindawo ezinobungozi kunye neenkqubo ezivela kwi-computer yakho. I-Kaspersky, uMcAfee, i-Norton, kunye neBitDefender ziphakathi kweenkampani ezibalaseleyo eziphuhlisa iimpawu ezinxamnye ne-virus. Inani leenkampani libonelela nge-antivirus yamahhala kwikhompyutha yakho. Nangona kunjalo, i-premium version ye-anti-virus iyakuqinisekisa inqanaba le-premium yokhuseleko.
Iiprogram zokulwa nentsholongwane-ntsha zinikezela ngabasebenzisi bokugqibela eziphathekayo ezifana nokuthintela ukhetho kunye nolwaphulo-mthetho..Ukwenza isigqibo esihle kwi-antivirus ukuba ihambe, iinkampani ezichasene ne-virus zinika iintsuku ezingama-30 zokuvavanya ukunyusa ukubandakanya umsebenzisi nokunika abasebenzisi ithuba lokusebenzisana neenkqubo. Ngaphambi kokukhuphela i-anti-virus, ukuhlaziywa okuzenzekelayo kufuneka kube phakathi kwezinto eziphezulu zokuqwalasela.
Iiprogram zokulwa nentsholongwane zenzelwe ukuhlaziywa ngokuzenzekelayo kwaye zenze ukukhangela okuzenzekelayo ezicwangciswe ngumsebenzisi-sipheli se-computer.
Amanqanaba angasetyenziswayo wokususa iTrojan kwi-computer yakho
Intsholongwane yeTrojan isuswa isetyenziswe ngokusebenzisa iindlela ezingezinye. Abanye abanikazi bekhompyutheni bakhetha ukuthatha iikhompyutheni zabo kwiindawo zokuthengisa iiPC ezihloniphekileyo kunye neentengiso kwaye zisuswe intsholongwane. Ukuba unentsholongwane isuswe, ungathatha ikhompyuter yakho kwi-computer okanye ingafika kuwe. Khangela inkampani yendawo ehloniphekileyo kwaye ujongane nemiba yakho, ufika apho baya kubuya khona ngexesha langempela.
Kwezinye iimeko, i-virus ye-Trojan ingaphumelela. Kule meko, umsebenzisi wokuphela komshini ushiywe kungekho nenye indlela kodwa ukufometha ikhompyutha. Kule meko, umsebenzisi wokugqibela ulahlekelwa yidatha. Unokwenza isipele iifayile zakho kwi disk, kwaye wenze ukukhangela ngokucokisekileyo xa ufaka iifayile kwiifestile entsha.
Njengomsebenzisi wekhompyutheni, unokubamba i-malware ngokudlulisa iifayile ezisuleleke kwiTrojan okanye ngokukhuphela iifayile ngaphandle kokuzicingela. Ukukhuphela isofthiwe ekhululekile kwi-intanethi ibangela ingozi enkulu kubasebenzisi bekhompyutha. Ukhuseleko lwakho lwe-intanethi alukwazi ukugxininiswa ngokwaneleyo. Hlalani nicinga ukufaka i-antivirus evela kwinkampani ehloniphekileyo ukuba niye niyigubungela lonke ixesha. Iipop-ups zivame ukwandisa izinga apho iintsholongwane zingena kubasebenzisi bekhompyutha. Gcina ithrekhi yesiphequluli sakho ukuze ungaphepheki.